Nhau dzeBhaibheri: Vanomirira muJerusarema - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ava vanhu vari pano vateveri vaJesu. Vamuterera ndokugara muJerusarema. Uye apo vose vari kumirira pamwe chete, ruzha rukuru runozadza imba yose. Runenge kushinyira kwemhepo ine simba. Ipapo marimi omwoto anovamba kuoneka pamisoro yomumwe nomumwe wavadzidzi. Unogona kuona mwoto pamusoro pomumwe nomumwe wavo here? Kose kunoreveiko?
Inenji! Jesu ava naBaba vake mudenga, ndizvo ari kudururira mudzimu mutsvene waMwari pavateveri vake. Unoziva here icho uyu mudzimu mutsvene unovaparira kuita? Vose vanovamba kutaura nemitauro yakasianasiana.
Vanhu vazhinji muJerusarema vanonzwa ruzha runoshinyira semhepo ine simba, vanouya kuzoona chiri kuitika. Vamwe vavanhuvo vanobva kumamwe marudzi vauya muno nokuda kwomutambo wavaIsraeri wePentekosta. Haiwa vashanyi ava vanoshamiswa sei! Vanonzwa vadzidzi vachitaura nemitauro yavo vamene pamsoro pezvinhu zvinoshamisa zvaitwa naMwari.
Vashanyi vanoti: 'Vanhu ava vose vanobva Garirea. Ko zvino, nei kuri kuti vanokwanisa kutaura nendimi idzi dzakasianasiana dzokunyika kwatinobva?'
Zvino Petro anosimuka ndokuvatsanangurira. Anosimudzira inzwi rake ndokuudza vanhu maurairwe akaitwa Jesu uye kuti Jehovha akamumutsa muvakafa. 'Zvino Jesu ari mudenga kuruoko rworudyi rwaMwari,' Petro anodaro. 'Uye adurura mudzimu mutsvene wakapikirwa. Ndokusaka maona nokunzwa manenji aya.'
Eya, panotaura Petro zvinhu izvi, vazhinji vavanhu vanonzwa urombo kwazvo pamsoro pezvakaitirwa Jesu. 'Tinofanira kuiteiko?' vanobvunza kudaro. Petro anovaudza kuti: 'Munodikanirwa kuchinja upenyu hwenyu ndokubhapatidzwa.' Zvino pazuvaro rimene vanenge vanhu 3 000 vakabhapatidzwa ndokuva vateveri vaJesu.
Sezvinoratidzwa nomufananidzo, chii chinoitika kuvadzidzi vaJesu vanga vakamirira muJerusarema?
Vakashanyira Jerusarema vanoshamiswa nei?
Petro anotsanangura chii kuvanhu?
Vanhu vanonzwa sei pashure pokuteerera Petro, uye anovaudza kuti vaitei?
Vanhu vangani vanobhabhatidzwa pazuva iroro rePentekosta ya33 C.E.?
Verenga Mabasa 2:1-47.
Mashoko aPetro anowanika pana Mabasa 2:23, 36 anoratidza sei kuti rudzi rwose rwechiJudha rwaivawo nemhaka yokuuraya Jesu? (1 VaT. 2:14, 15)
Petro akaratidza sei muenzaniso wakanaka wokurangarira muMagwaro? (Mab. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; VaK. 4:6)
Petro akashandisa sei ‘kiyi dzoumambo hwokumatenga,’ dzaakanga avimbiswa kupiwa naJesu? (Mab. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)